Gbasara anyị - HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NECESSITIES CO., LTD
SGS, BV, TUV na ISO9001 kwadoro ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere ọkachamara otu nke ngwaahịa nyochaa, QC ngalaba na ahịa otu.
Anyị nwere iri-puku ọkwa mba ọkọlọtọ dị ọcha omumuihe. A na-arụpụta ngwaahịa niile n'okpuru nnukwu ụlọ ọrụ.
Anyị nwere 15 set nke mkpakọ ngwá maka abịakọrọ akwa nhicha na abịakọrọ ihu nkpuchi.
Anyị nwere 5 mmepụta edoghi nke n'ichepụta mpịakọta akwa nhicha ka afọ ju anyị ugbu a ahịa ikike chọrọ, na anyị na-emepe emepe ọhụrụ akụrụngwa.
Anyị nwere 3 mmepụta edoghi nke n'ichepụta akọrọ-ehichapụ na akpa.
Onye isi anyị, onye bụ nna anyị, ọkachamara nke igwe niile, yabụ igwe ọ bụla na ụlọ ọrụ anyị na-edozi onwe ya na njirimara pụrụ iche. Ọ na-eme ka ngwaahịa anyị dịkwuo mma ma nwee nnukwu ikike nrụpụta.
Ruo ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa niile bụ ndị mmekọ azụmaahịa anyị ogologo oge. Anyị na-eme ka mmekọrịta azụmahịa dabere na ọnụahịa asọmpi, ezigbo mma, obere oge na ọrụ dị mma.
Olileanya na ị ga-abụ ndị mmekọ anyị!
Anyị ga-enye gị afọ ojuju ngwaahịa na ọrụ.
Anyị nwere Ugboro ahịa otu ọzụzụ ka mma anyị. Ọbụghị naanị nkwukọrịta nke ndị ahịa, kamakwa ọ bụ ọrụ ndị ahịa anyị.
Ebumnuche anyị inye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma, nyere ndị ahịa anyị aka idozi nsogbu n'oge nkwukọrịta ajụjụ ha.
Ọ bụla ahịa ma ọ bụ nwere ahịa, anyị ga-abụ mma na-emeso ha. N'agbanyeghị na ha ga-edebe anyị iwu ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị ga-eme ka anyị dịrị mma ruo mgbe ha ga-ezuru ozi nke anyị na ngwaahịa ma ọ bụ anyị factory.
Anyị na-enye ndị ahịa ihe atụ, na-enye ezigbo nkwukọrịta Bekee, na-enye ọrụ n'oge.
Site na ọzụzụ na nkwukọrịta n'etiti ndị ọzọ, anyị na-amata nsogbu anyị ugbu a ma anyị na-edozi nsogbu n'oge iji nwee ọganihu nke onwe anyị.
Na isoro ndị ọzọ na-ekwurịta okwu, anyị na-enweta ozi ndị ọzọ site na ụwa. Anyị na-ekerịta ahụmịhe anyị ma na-amụta ihe n’aka ibe anyị.
Ọzụzụ otu a anaghị enyere anyị aka imeziwanye ọrụ anyị, kamakwa mmụọ nke iso ndị ọzọ kerịta, obi ụtọ, nrụgide ma ọ bụ ọbụlagodi iru uju.
Mgbe ọ bụla ọzụzụ, anyị maara ihe nke otú esi ekwurịta okwu na ndị ahịa, mara ha ina na-eru a na-eju afọ imekọ ihe ọnụ.
Ga leta ndị ahịa na France
Ihe ngosi Dubai na 2016 afọ
Ihe ngosi Dubai na 2017 afọ
HongKong Onyinye Ngosi na 2016 afọ
Ndị ahịa na-eleta na Europe na 2017 afọ
Ngosi Japan na Osaka na 2015 afọ
Ihe ngosi Poland na Warsaw na 2016 afọ
Ihe ngosi Canton na 2015 afọ